डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२० जारी, प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बोधन
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, विकास र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले शनिबार ‘डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ शनिबार हुँदैछ ।
ब्राण्डवर्थ प्रालिले आयोजना गर्न लागेको कन्क्लेभमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको सहकार्य छ । विभिन्न आठवटा सत्र रहने उक्त कन्क्लेभमा कहिले हुन्छ डिजिटल नेपाल, डिजिटल बैंकिङ डिजिटल रेमिट्यान्स र डिजिटल मार्केट प्लेसलगायतका विषय समावेश छन् ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको डिजीटाइजेसनको सम्भावना, यसको आगामी बाटो, आवश्यक सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप तथा त्यसले सिर्जना गर्ने अवसरका बारेमा सरोकारवालासँग सघन छलफल हुने आयोजक संस्था ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले जानकारी दिए ।
‘कोरोना महामारीले एकातर्फ चुनौती थपेको छ तर यो समयलाई अर्काेतर्फबाट अवसरको रूपमा लिएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ’, गजुरेलले भने । सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजीटाइजेसनमा लैजाने अवसर प्रदान गरेको छ ।
नेपाली इ–कमर्श इकोसिस्टमका सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने यस कन्क्लेभले नेपालमा डिजिटल इकोनोमीका बारेमा नयाँ बहस सुरु गर्ने विश्वास आयोजकको छ । कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन पे डिजिटल इकोनोमी कल्क्लेभलाई गर्नुभएको भर्चुअल सम्बोधन !
कोरोना महामारीका कारण नेपाल मात्रै होइन, संसारका हरेक देश समस्यामा परेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र नै संकूचनमा गएको छ । केही देशहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिसकेका छन । समग्र एसियाको आर्थिक बृद्धि नकारात्मक हुनसक्ने एसियाली विकास बैकको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कोरोना महामारीको प्रभाव आँकलन गरिएभन्दा बढी हुने संकेतहरु देखिइसकेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न तथा त्यसका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले सबै प्रयत्नहरु जारी राखेको छ । मैले निजी क्षेत्रलाई भनिसकेको छु – सरकारको मन गरिब छैन, गच्छे अनुसारको सहयोग र समन्वय गर्न दृढ छ ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिष्दको बैठकलाई कागजको प्रयोगरहित अर्थात् पेपरलेस बनाएको छ, सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक्सन रुमहरु स्थापना गरी भर्चुअल प्रविधि प्रयोगको शुरुवात र अभ्यास गरेको छ, मैले सिंगापुरमा उपचारको क्रममा रहँदा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुसँग भर्चुअल मिटिङ पनि गरेको यहाँहरुलाई सम्झना रहेको हुनुपर्दछ । त्यतिबेला कतिपय मानिसहरुले महत्व, औचित्य र आवश्यकता बुझ्न नसके पनि आज त्यसको सान्दर्भिकता र महत्व व्यवहारतः नै पुष्टि भएको छ ।
अहिले हामीले सिंहदरबारबाट ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला र ७ वटै प्रदेशका उद्घाटन, शिलन्यास, अन्तक्रिया, समन्वयात्मक छलफल, परामर्श र सम्बोधन गर्नसक्छौं, यसमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले हामीलाई धेरै सहज र मितव्ययी बन्न संभव तुल्याएको छ । विदेशस्थित नियोगहरु र नेपालीहरुमाझ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि डिजिटल माध्यमबाट भर्चुअल सहभागिताको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि डिजिटल नेपालको अभियानअन्तर्गत सबै आर्थिक र गैरआर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक डिजिटल नेपालको खाका तयार पारी ई–गभर्नेन्सका लागि नीतिगत आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको म स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको यस डिजिटल नेपाल खाकामा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल फाउन्डेसन गरी ८ प्रमुख क्षेत्रहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै, यी ८ क्षेत्रलाई समेटने गरी नेपाललाई आर्थिक– सामाजिक प्रगतितर्फ निर्देशित गर्ने उद्देश्यका साथ ८० डिजिटल पहलहरु पहिचान गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको बृहत्तर आयामको रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको हो ।
समग्रमा भन्दा अबको हाम्रो युग डिजिटल अर्थतन्त्रकै युग हो । तपाईंहरुले आयोजना गर्नुभएका यस्ता कार्यक्रमहरुले नयाँ युगको प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा ईंटा थप्ने काम गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले समेत स्वामित्व लिने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको पूर्ण सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
एकै घरका ५ जनाले कर्णालीमा हामफालेर आत्महत्या गरेको आशङ्का
सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने ? जसपामा दुई धार !
नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि कुटपिट, कारवाही गर्न कर्मचारीको माग
सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्न माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै